Global Voices teny Malagasy » Shina: Lany andro ny bilaogy? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2019 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Hotontosaina amin'ny 15-16 novambra ao Guangzhou, Shina ny fihaonamben'ny bilaogera Shinoa faha-4 .
Na dia izany aza, tamin'ny taon-dasa, misy ny adihevitra mitohy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Shinoa mikasika ny hoe maty sa tsia ny kolontsaina bilaogy. Ankoatra izay, vao haingana ny bokee.com sy blogchina.com, BSPs roa voalohany indrindra natsangan'i Fang dong-xing (solon'anarana mpialoha lalana tamin'ny bilaogy) ao Shina no tafiditra anaty olana ara-barotra.  Mitady fampiasam-bola hamadika ny tranonkala ho seha-piarahamonina media marolafy i Fang.
Tamin'ny volana jolay, nanambara i Maitian, bilaogera mavitrika fa lany daty ny fibilaogina ary nanapa-kevitra hivadika ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy izy mba hifandraisana amin'ny namany .
William long, bilaogera teknolojia malaza, nanondro ilay lahatsoratra ihany koa mba haneho hevitra momba ny fanjavonan'ireo tolotra maro hafa momba ny blaogy, toy ny fanangonam-baovao BSP sy RSS  ao Shina:
Misokatra kokoa sy manokana kokoa ny bilaogy, ambony kokoa ny kalitaony. Mikatona kokoa ny SNS, indrindra manoloana ny milina fikarohana. Mifanohitra amin'ny fisokafan'ny bilaogy izany ary misy fiantraikany amin'ny fampielezam-baovao. Tena sarotra haely amin'ny SNS ny lahatsoratra tsara. Ankehitriny, maka tahaka facebook ny ankamaroan'ny SNS any Shina, izay fara-vahaolana. Ny SNS tsara indrindra dia ny QQ an'ny Tencent , saingy tsy mahita fitoviana eo amin'ny QQ sy ny facebook ianao. Ny zavatra mahatsikaiky dia tsy nanambara mihitsy ny Tencent fa SNS.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/25/137332/
 fihaonamben'ny bilaogera Shinoa faha-4: http://www.cnbloggercon.org/2008/en
 tafiditra anaty olana ara-barotra.: http://tech.sina.com.cn/i/2008-10-30/11562545623.shtml
 lany daty ny fibilaogina ary nanapa-kevitra hivadika ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy izy mba hifandraisana amin'ny namany: http://maitian.blog.techweb.com.cn/archives/2008/200873145319.shtml
 fanjavonan'ireo tolotra maro hafa momba ny blaogy, toy ny fanangonam-baovao BSP sy RSS: http://www.williamlong.info/archives/1554.html
 QQ an'ny Tencent: http://tencent.com/en-us/index.shtml